विन्डोजमा रानसमवेयरलाई कसरी लड्ने र सुरक्षित रहनुहोस् भन्नेमा Semalt विशेषज्ञ
यो भन्नु गलत हुनेछैन कि विशाल रन्समवेयर आक्रमणले विश्वव्यापी रूपमा ठूलो संख्यामा कम्प्युटरहरूलाई संक्रमित गरिसक्यो, र विभिन्न देशहरूमा अपांग स्मार्टफोनहरू।
केहि संग अगाडि बढ्नु अघि, हामी ransomware के हो को एक विचार हुनुपर्छ। जेसन एडलर, Semalt का ग्राहक सफलता प्रबन्धक, यो परिभाषा र आक्रमणहरूलाई वेवास्ता गर्न को लागी एक नजर राख्दछ।
र्यानसमवेयर कम्प्युटर प्रोग्रामहरूको एक खतरनाक रूप हो। योसँग सेकेन्ड भित्र कुनै पनि प्रकारको अपरेटि system प्रणाली र कुनै पनि ब्राउजरलाई असर गर्ने क्षमता छ। टेक्नोलोजी विशेषज्ञहरूको दाबी छ कि भर्खरका महिनाहरूमा १ अरब भन्दा बढी विन्डोज पीसीहरू ransomware बाट विश्वव्यापी रूपमा संक्रमित भएका छन्। ह्याकर्सको सबैभन्दा ठूलो लक्ष्य भनेको अस्पताल र सुरक्षा एजेन्सीहरूको कम्प्युटर प्रणाली हो।
जब ransomware तपाइँको कम्प्युटर मा प्रवेश, यो एक ठूलो संख्या मा फाईलहरू ईन्क्रिप्ट हुन सक्छ। त्यसो भए तपाईले आफ्नो डाटा पहुँच गर्न सक्नुहुन्न। उद्देश्य केहि प्रोग्रामहरू र फाईलहरूमा तपाईंको पहुँच सीमित गर्नु हो कि ह्याकरहरूले तपाईंलाई पैसा माग्न सक्दछन्। तपाईंको पहुँच पुन: भण्डारण गर्न, तपाईंले केहि $ 300 बाट ,000 .००० तिर्नुपर्नेछ। ह्याकरहरूले तपाईंलाई तपाईंको उपकरण र त्यसका फाईलहरू पहुँच गर्न दिदैनन् तपाईलेसम्म पूरै वा आंशिक रूपमा तिर्ने पैसा तिर्ने छैन।
हालका महिनाहरूमा, संसारभरि धेरै संख्यामा कम्प्युटर प्रणालीहरू प्रभावित भएका छन्। उदाहरण को लागी, विभिन्न NHS अस्पतालहरु संक्रमित थिए, र तिनीहरुका कम्प्युटर उपकरणहरु पूरै बिग्रियो। केवल यो मात्र होइन, युके सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणालीहरू पनि अघिल्लो महिना बन्द भए, र बिरामीहरूलाई अस्पतालमा भर्ना गरिएको थिएन किनकि यस मुद्दाको कारणले हो। रसियाका १० हजार भन्दा बढी कम्प्युटरहरू गम्भीर रूपमा बिग्रिएका थिए। संयुक्त राज्य अमेरिकाका थुप्रै फेडएक्स कार्यालयहरू र क्यानडाका विभिन्न कम्पनीहरू रन्समवेयरले समाते। आक्रमणको प्रकृति वाणा डिक्रिप्टको रूपमा रहेको भाइरसको प्रकारसँग सम्बन्धित छ जुन सजिलैसँग कम्प्युटर प्रणालीहरूमा प्रवेश गर्दछ र तिनीहरूलाई महत्त्वपूर्ण संख्यामा संक्रमित गर्दछ।
तपाईं ransomware कसरी प्राप्त गर्नुहुन्छ?
त्यहाँ केहि तरिकाहरू छन् ransomware कम्प्युटर प्रणाली संक्रमित। सब भन्दा साधारण तरीका भनेको ईमेल संलग्नकहरू मार्फत हो। ह्याकरहरूले तपाईंलाई संक्रमित फाईलहरू र सुन्दर पप-अप विन्डोजहरूको साथ ईमेलहरू पठाउँछन्। तिनीहरूको सन्देशहरू कुनै पनि मूल्यमा खोल्नु हुँदैन र पढ्नु हुँदैन। ह्याक गरिएका वेबसाइटहरूले स्वचालित रूपमा तपाईंको प्रणालीहरूमा भाइरसहरू र मालवेयर डाउनलोड गर्दछन् र ती असुरक्षित वस्तुहरू तपाईंको फाइलहरूको अधिक संक्रमित गर्न चलाउँछन्। यदि तपाइँ तपाइँको साइट मा केहि संदिग्ध सामग्री देख्नुहुन्छ भने, तपाइँ कि त एक सामग्री एन्टीवायरस स्थापना गर्नु पर्छ त्यस सामग्रीबाट छुटकारा पाउन प्लगइन प्रयास गर्दै। वैकल्पिक रूपमा, तपाईं नजिकको प्रहरी स्टेशनलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ वा सकेसम्म चाँडो एफबीआईलाई मुद्दा रिपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ।
रन्समवेयरबाट कसरी बच्ने?
बिभिन्न रिपोर्टहरूले संकेत गर्दछ कि ransomware ले विश्वभर मा ठुलो संख्यामा कम्प्युटर प्रणालीहरु लाई गम्भीर क्षति पुर्‍याएको छ। विन्डोज र लिनक्सको साथ धेरै जसो मानिसहरू यसलाई संक्रमित हुन्छन्। सुरक्षित रहन र मालवेयरबाट बच्ने उत्तम तरिका भनेको तपाईंको विन्डोज अपडेट राख्नु हो। तपाइँले सँधै विन्डोजको नयाँ संस्करणहरू स्थापना गर्नुपर्नेछ र तिनीहरूको सेटि settingsहरू राख्नुभयो। Ransomware द्रुत रूपमा फैलिन्छ किनकि विभिन्न कम्प्युटरहरूले ब्राउजर र विन्डोजको पुरानो संस्करणहरू चलाउँछन्। विन्डोज र ब्राउजर अपडेट गर्नाले तपाईंको धेरै समय लिदैन; यसले तपाईंलाई इन्टरनेटमा सुरक्षित राख्दछ र तपाईंको फाइलहरूलाई ठूलो हदसम्म सुरक्षित गर्न सक्छ।
धेरै जसो व्यक्तिहरूले वाइफाइ सेटिंग्समा विन्डोज अपडेट विकल्प रोकिन्छ वा बन्द गर्दछ। तपाईंले त्यो कहिले गर्नु हुँदैन किनभने यसले तपाईंको कम्प्युटर प्रणालीलाई गम्भीर समस्या निम्त्याउन सक्छ।
सुरक्षा सफ्टवेयर स्थापना र अपडेट गर्नुहोस्
अन्तिम तर कम्तिमा तपाईले नियमित आधारमा सुरक्षा उपकरणहरू स्थापना र अपडेट गर्नुपर्नेछ। केहि प्रसिद्ध तेस्रो पार्टी सफ्टवेयर र प्रोग्रामहरू हुन् AVG एंटीवायरस, अविरा फ्रि सिक्युरिटी सूट, अवास्ट फ्री एन्टिभाइरस, Bitdefender एंटीवायरस सफ्टवेयर र पांडा नि: शुल्क एंटीवायरस।